भोजनको तीन श्रेणी : लसुन प्याजलाई नै किन तामसिक भोजन मानिन्छ ? जान्नुहोस
लसुन र प्याजले खानाको स्वाद बढाउँछन् । तर ब्राह्मणहरू अनि जैनहरूलाई लसुन प्याज खान प्रतिबन्ध छ । यो तामसिक भोजन भएको र यसले हाम्रो प्रवृत्तिलाई खराब बनाउने तर्क दिइन्छ।
आयुर्वेदका अनुसार, भोजनलाई तीन श्रेणीमा बाँडिएको छ । सात्त्विक, राजसिक र तामसिक । सात्त्विक भोजन गर्दा शान्ति, संयम, पवित्रता र आनन्द जस्ता गुण विकसित हुन्छन् । राजसी भोजन लिँदा एकोहोरोपन र खुशी जस्ता गुणमा वृद्धि हुन्छ । तामसिक भोजन गर्दा चाहिँ क्रोध, एकोहोरोपन, अहंकार र विनाश जस्ता अवगुणमा वृद्धि हुन्छ।
दूध, घिउ, पीठो, चामल, लौका, परवर, करेला जस्ता पदार्थ सात्त्विक हुन् । मिठाइ, अमिलो, पीरो र तिक्खर स्वाद भएका खानेकुरा राजसी हुन् । लसुन, प्याज, माछामासु र अण्डा जस्ता खाद्य पदार्थ तामसिक हुन्।
समुद्रमन्थनबाट निस्केको अमृतलाई भगवान् विष्णुले माहिनी रूप धरेर देवताहरूलाई बाँडेपछि छलपूर्वक राहु र केतु नामक राक्षसले अमृतका केही थोपा निले । भगवान् विषण्लाई यस छलका बारेमा थाहा भएपछि उहाँले क्रोधित भएर दुवै राक्षसको टाउको जिउबाट अलग गरिदिनुभयो ।
शिर काटिएपछि अमृतका केही थोपाजमीनमा झरे जसबाट लसुन र प्याज उब्जिए। अमृतबाट उत्पन्न भएका कारण यिनमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छ तर राक्षसको मुख परेको भएर यसमा कडा गन्ध आउँछ र यसलाई अपवित्र मानिन्छ।
यो त भयो पौराणिक कारण । वैज्ञानिक कारणको कुरा गर्दा लसुन र प्याज दुवैको प्रकृति तातो हुन्छ अर्थात् यिनलाई खाँदा शरीरमा तातो भएर ऊर्जा उत्पन्न गर्छ । शरीर तातेर कामवासना पनि वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा शरीर तथा मनमा तामसिक वासना उत्पन्न हुन्छ । यसरी वासनाले ग्रस्त मनले उग्र र असामाजिक काम गराउन मानिसलाई प्रवृत्त गर्छ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा कुनै पनि कुरा सीमामा बसेर नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । धेर लसुन प्याज खाँदा खराब गर्ने हो । ठिक्क मात्रामा खाँदा भने यसले फाइदै गर्छ।
किन बढाइयो स्यानिटरी प्याडको मूल्य ?
डेटिङ जाँदाको बिल कसले तिर्ने ?
किन मिल्दैनन् आन्ध्र र प्रशान्त महासागर ? यस्तो छ कारण
के तपाईलाई हजारको सट्टामा लेखिने K को अर्थ थाहा छ ?
तपाईको क्रेज घटाउने यी १० बानी, जुन आजैबाट त्याग्नुस
मानिसको मृ’त्युको संकेत गर्ने यी ११ सपना